प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकमाथि लाठी र बुट बजारिरहँदा कसरी मनाउनु संविधान दिवस ? Canada Nepal
प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकमाथि लाठी र बुट बजारिरहँदा कसरी मनाउनु संविधान दिवस ?
काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ५ वर्ष पूरा भएको छ । संवत् २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । सोही बेलादेखि असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
संविधान जारी गर्ने खबरले मुलुकभर उत्साह र उमङ्ग बढाएको थियो । संविधान जारी गर्ने दिन २०७२ असोज ३ गते मुलुकभरको मात्रै नभएर चासो राख्ने बाह्य मुलुकको ध्यान बानेश्वरस्थित संविधान भवनमा केन्द्रीत थियो । मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका दलको असहमतिका बाबजुद असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन संविधानसभा भवन परिसरमा आतिशबाजी गरियो । आतिशबाजीले आकाशमा रंगिचङ्गी आकृति कोरे । सडकमा नेपालको नक्सासहितको आकृति बनाएर दीपावली गरी उत्सवको रुपमा मनाइयो । घर घरमा दीपावली गरेर नयाँ संविधानलाई स्वागत गरियो ।
नयाँ संविधानले शासक र शासित दुवै वर्गलाई समान नजर राख्ने आशा गरियो । मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने विश्वास गरियो । उक्त संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यका तीन तहमै जनप्रतिनिधि चुनिए ।
तर, छैटौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा जनतालाई आफ्नो अभिमत राख्न सरकारले अघोषित रुपमा बन्देज लगाएको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र तथा संसदीय प्रणालीमा जनताले दुई किसिमले आफ्नो मत जाहेर गर्छन्, एक मतपत्र र अर्काे सार्वजनिक रुपमा आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत ।
तर, मतपत्रमार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न अझै दुई वर्ष बढी समय बाँकी छ भने सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा धारणामार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न नागरिकले सधैं पाउँछन् । मौजुदा संविधानले पनि वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो विचार राख्ने अधिकार दिएको छ ।
छैटौं संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकलाई आफ्ना मत जाहेर गर्न रोक लगाइएको देखिन्छ । विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सेवाअवधि पूरा हुनै लाग्दा उनको पुनर्नियुक्तिको माग राखेर भएका शान्ति पूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगले शासक वर्ग जनताको अभिमत सुन्न चाहँदैन भन्ने देखायो ।
जसरी राणाकाल र पञ्चायत कालमा जनताको मत सुन्न शासक चाहँदैन थिए, त्यसगरी वर्तमान सरकार आफ्नो निर्णय र कदमविरुद्धका नागरिकका अभिमत व्यक्त गर्न दिँदैन भन्ने प्रमाणित भयो । गत मंगलबारबाट कुलमान औपचारिक रुपमा विदाइ भएपछि काठमाडौंको माइतीघर, बबरमहललगायतका स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले दलहरुको प्रदर्शनकाक्रममा जस्तो सडकका रेलिङ भत्काउनेदेखि सडकका बोटबिरुवा भाँच्ने काम गरेका छैनन् । कसैका विरुद्ध नभएर एक कुशल र सफल कर्मचारीको पुनर्नियुक्तिको माग राखेर आफ्नो अभिमत सार्वजनिक गरेका हुन् । तर, प्रहरीको नजरमा उनीहरु कुख्यात अपराधिभन्दा कम देखिएनन् ।
शान्तिपूर्ण रुपमा नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रहरीले अन्धाधन्धु लाठी प्रहार गर्ने, लखेटी लखेटी पिट्ने, बुटले जथाभावी हान्ने, बाटोमा हिँडिरहेकालाई धरपकड गर्ने, पत्रकारका क्यामेरा र बुम फुटाउने, पत्रकारसँग आफ्नो विचार राखिएका नागरिकलाई लखेटी लखेटी पिट्नेजस्ता घटनाले वर्तमान सरकार जनताको वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिरहेको छ । यसरी जनतालाई बोल्न बन्देज राणाकालमामात्रै थियो, अहिले गणतान्त्रिक सरकारले सोही व्यवहार जनतालाई गरिरहेको छ ।
जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै जनतासँग कसम खाएर दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर बनेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले माइतीघर र बबरमहल क्षेत्रमा केही दिनयता नागरिकमाथि गरेको ज्यादती सबैले देखेकै छन् ।
यस्तो अवस्थामा परेको छैटौँ संविधान दिवस नागरिकले कसरी मनाउने प्रधानमन्त्रीज्यू ? संविधान लिखित दस्तावेजमात्रै होइन, त्यो नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको मूल कानुन पनि हो । कानुन कार्यान्वन नगर्ने, जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित भइरहेका बेला संविधान दिवस मनाएर दलका नेताहरुलाई शासक बनाउनु बाहेक अरु केही देखिएन । संविधान फेरियो, नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहार फेरिएन । नेताहरुको जीवनशैली आरामदायीमा परीणत भयो, जनता भोकभोकै मर्न अवस्था सृजना भयो । पहुँच र दलको गुणगान गाउने असक्षम व्यक्तिहरु महत्वपूर्ण स्थानमा कुनै विधि र प्रक्रिया नपु¥याई नियुक्त भए, सफल र कुशल कुलमानलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति गर्न जनताले गरेको मत जाहेरलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक ठानिएन ।
यसर्थ संविधान फेरियो, शासकका अनुहार फेरिए, तन्त्रहरु फेरियो । तर, जनताको आवाज सुन्ने र उनीहरुको हितमा काम गर्न सरकार बनेन । संविधान सभाबाट जारी हुने संविधान पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भनेजस्तै जनताले भोगेका बेला प्रधानमन्त्रीज्यू कसरी मनाउनु छैटौँ संविधान दिवस ?
आश्विन ३, २०७७ शनिवार १७:२५:०४ बजे : प्रकाशित